Baadi goob baahi badan! Q-21AAD W/Q: Maxamed Muuse Sh. Nuur | Laashin iyo Hal-abuur
Muuse wuxuu bilaabay in uu sii balaarsado awoodiisa gudaha iyo tan dibaddaba, xaashi saacadba saacadda ka dambaysa waxaa gacantiisa ka sii baxayay asxaab fara badan, dunida waxaa la yiri dadku waa dan u joog, duufaantana waa degaan joogo.
Dadku mar walba halka ay naqdooda ka helayaan ayey ag joogaan, halka dabayshuna marba deegaan ay ku dagto.
Xaashi wax maslaxad ah maadaama aan lagu haysan dadku waa ka dhuumanayeen, muuse xagiisa ayey ka shidnayd.
Muuse wuxuu ogaa kaalinta uu c/rashiid ku lahaa boqortooyada xaashi sidaas darteed ayuu isku dayay in uu gacanta kusoo dhigo laakin wuu ogaa in aysan xaalad fudud ahayn balse qorshihiisa ayuu xariiqday.
Dhinaca kale xaashi, c/rashiid, iyo haajir ayagana waxay wadeen shirqool ay kaga takhalusi lahaayeen muuse iyo qoyskiisa sii xoogaysanaya.
Xaashi waxaa usii dheeraa isaga Dowladda ayaa ugaarsanaysay ayaga oo raadinayaya tallaabo walba ama dhibic biya ah oo caddayn u noqon karta dambiyada xaashi lagu raadinayo.
Sidaa darteed, xaashi waxaa ku furnaa dagaalo dhinacya badan oo siyaasad, militari iyo qoysba lahaa.Taas waxaa xaashi usii dheerayd isaga oo markan jilaya nin hawada ka baxaya oo maskax ahaan dhintay waana sababta sii xoogaysay dadaalka uu muuse ku doonayo in uu soo xera gashto dhammaan ilahaa ganacsi uu xaashi lahaa, xaashi naftiisa dhagarta dhinac ayuu ka ciyaarayay isaga oo is maydinaya ayuu hadana dagaalkiisa sii watay isaga oo adeegsanayay c/ rashiid iyo Haajir.
C/ rashiid ayaa qorsha dagsan ula yimid isaga oo doonayay in mar qura laga takhaluso muuse iyo kooxdiisa, isaga oo kula soo heshiiyay xer ilaaliya qaadir in uu jiri doono kulan ay isugu imaan doonaan muuse iyo dhamaan xubnaha musuqa dowladda ee muuse kala shaqeeynaya sii wadashada ganacsigiisa sharci darrada ah..
Isaga oo taa ka duulayana c/rashiid wuxuu xirii la sameeyay najmadiisa hore oo markan ahayd xildhibaanad ay xaashi iyo isaga geysteen meesha.
Najma dumar ayey ahayd waxayna cuqdad xun oo cadaawad isku badashay u qabtay, c/ rashiid oo damiciisa u buruburiyaya jacaykooda, sidoo kalana been uga sheegay Uur ay lahayd oo uu si aysan fahamsanayn uga soo riday.
Xaalad cakiran oo cadaawad ka muuqato ayey u haysay, hadana maadaama uu codsi ula yimid waxay is tiri waa jaaniska aad uga aar gudan karto.
Najmo xaashi ayaa meesha geystay balse hadda waxay ka mid noqotay kooxda muuse la shaqaysa ee dantu xagaa bidday.
C/ raahiid oo qorshihiisa uu uga takhalusi lahaa muuse wada ayaa u tagay Ciise doonyaale isaga oo ku war galiyay in uu doonayo in uu ka takhulso caawa muuse iyo kooxdiisa oo kulan la leh xildhibaanada iyo maamulka Gobolka, najmana ay siisay waqtiga kulanka la isugu imaan doono.
Ciise doonyaale oo aad uga soo horjeeday soo kicitaanka Muuse iyo wiilkiis mahad ayaa ciidankiisa diyaarsaday, haajir isagana sidoo kale, C/raahiidna dhanka siyaasada iyo shrqoolka ayuu kala shaqaynayay dhinaca booliska.
Wax walba waxay hallaabeen markii la ogaaday in Najmo ay qorshaha dhan ka been sheegtay kadib markii la ogaaday in saacaddii ay kulanka sheegtay ka hor laba saac uu kulanka dhacay meeshana lagu kala tagay.
Meesha ayey ku kulmeen dhamaan ciidadameed haajir iyo ciise ay wateen iyo kuwii booliska ee uu diyaariyaya xer ilaaliye Qaadir.
Waxba waa ka soo naas caddaan waayeen qorshaha meesha ka dhacay, taasna waxay mar kale u noqotay marmarsiiyo uu taliye daacad ugu caddeeyo xer ilaaliye qaadir in c/ rashiid uusan waligiis daahirmayn oo uu beenlow yahay.
C/rashiid wuxuu ciyaarayay ciyaar dhan walba ah oo ay isaga iyo xaashi ka soo wada shaqeeyeen.
Booliska waxay u haysteen nin ayaga kala shaqaynayaa soo xiridda Xaashi, xaashina wuxuu u ahaa maqaalin uu ku dabayo booliska iyo muusaba .
Kadib qorshihii fashilmay ee muuse lala rabay ayuu muuse gacanta kusoo dhigay ciise doonyaale iyo c/
rashiid, kadibna c/ rashiid ku qasbay in uu madaxa ka toogto ciise isaga oo ka duubaya muuqaal uu c/ rashiid ku doonayo in uu isaga ugu shaqeeyo, hadduu isku dayo qayaanana uu muuqaalkaas tusaya dhamaan magaalada iyo booliskaba taas oo soo dadajin doonta dilkiisa, dadka ugu horeeyo ee dili doonana ay noqon doonaa Xaashi iyo Haajir.
Ciise doonyaale maydkiisa ayaa magaalada bartamaheeda la soo dhigay iyada oo la soo raaciyaya digniin loo diryay Xaashi iyo koxdiisa.
C/ rashiid waa la qabsaday, muuse ayuu markan qasab kula shaqeeyaa, dhanka kale magaalada oo dhan waxaa ka socotay baroor diiq looga xunyahay dilka ciise doonyaale.
Waxaa soo kordhayay walaaca iyo kicid dadka degaanka ah oo ay ku jiraan Maryan, Haajir, iyo C/raahiid iyo dhamaan dadka ugu firfircoonaa magaalada, dhamaantoodna dagaal ayey ku baaqayayeen.
Xaashi ma rabin in dagaal dhaco, sidaa darteed isaga oo fakaraya lana murmaya maryan iyo haajir ayuu c/rashiid usoo galay isaga oo runta uga sheegay dilka iyo sida uu ugu dhacay ciise doonyaale, wuxuuna ka hor qirtay in isaga lagu qasbay ka takhalusiddiisa.
Xaashi iyo Haajir oo aad uga kululaaday ayaa hadana garowsaday sida uu ma naxe u yahay Muuse iyo farriinta uu dirayo.
Xaaladdaas kacsnaanta iyada oo lagu jiro ayuu hadana mararka qaar xaashi dadka kale ee qoyskiisa ah u muujinayay in uu yahay nin jismi ahaan nool balse maskax ahaan dhintay.
Siciido ayaa dhowr jeer inta u tumid ku dhaga hadashay Xaashi iyada oo waliba kula hadalayso hadalo aad u qallafsan muujinayana sida aysan waligeed ugu faraxsanayn in ay isaga ka hoos noolaato, iminkana ay doonayso in ay ka guurto oo baqtigiisa aysan daawan karin.
Xaashi waxay u ahayd barasho uu baranayo dadkiisa, sidoo kale ilhaan waxba ma dhaamin dhanka hooyadeed oo iyana ku dhaga hadalka xun ee aabaheed dhankeeda ayey ka wadday iyada oo waliba markan qabto wiilka muuse ee mahad lagu magacaabo.
Mahad iyo ilhaan dhowr jeer ayuu dagaal dhex maray, xiriirkooda marnaba ma wanaagsanayn, mahad oo ka takhalusi raba ilhaan xaashina sirtiisa ay fashil ku dhawdahay kadib markuu u adkaysan waayay ceejada lagu hayay gabadhiisa ayaa waxaa mar qura meesha soo galay haajir oo isla markiiba ka qbatay mahad ilhaan.
Muuse wuu dareensanaa in xaashi is maahinayo, sidaa darteed, dhaqtaradda cusub ee xaashi laguna magaacabay Drs Hani ayuu lacag badan ku gatay si ay usoo ogaato bal in xaashi dareen ahaan dhintay iyo in kale.
Dr Qaasim iyo siciido go’aan ayey gaareen ay uga haajirayaan magaaladan ,sidoo kale xaashi ayaa inta uusan hawada iska saarin u qoray warqaddeeda furriinka ah ee ayssn shardi ahaan xoola ku qaadan karin waa haddii ay doonayso in xaashi u fasaxo la jirka Qaasim
Xaashi garbihiisa maalinba maalinka dambaysa waa laga kala siibanayay balse markan waxaa is xilqaamay oo aabaheed xanaanadiisa dhaxda u xiratay Maryan oo gadaaal ka ogaan doonta in aabaheed uusan wali maskax ahaan dhiman, qorshaha sidan loo samayayna ay la ogyihiin C/ rashiid iyo Haajir.
Maryan xiriir wanaagsan ayey labadbaa la lahayd waa haajir iyo c/rashiid, marka hore waa la fajacday waana aqbali waysay in ay aabaheed oo ay aaminsanayd in maskax ahaan uu dhintay uu wali nool yahay.
La soco 22aad